Mareykanka oo Sheegay in Duqeyn Lagu Dilay Seddex oo Ka Tirsanaa Shabaab – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Military-ga Mareykanka ayaa sheegay inay dileen seddex dagaalyahan oo ka tirsan Al Shabab kadib 6 duqeymo oo ay ka fuliyeen Somalia.
Qoraal ay soo saartay AFRICOM ayey ku sheegtay in duqeymahan lala beegsaday saldhigyo Al Shabab ay ku leedahay buuraleyda silsiladaha ah ee Golis.
Duqeyntan ayaa ah tii lixaad ee lala beegsado dagaalyahanada Al Shabab iyo Daacish tan iyo shantii bishan May markaasoo Mareykanku sheegay in seddex dagaalame oo ka tirsan Al Shabab uu ku dilay Tortoroow.
Duqeymaha Mareykanku waxa ay taageero u yihiin ciidamada dowladda Somalia ee dagaalka kula jira Al Shabab si loo difaaco shacabka Soomaaliyeed loona kordhiyo fursadaha ay dowladda kula wareegi karto dhul badan ayaa lagu yiri qoraalka Africom.
AFRICOM ayaa sheegtay in siddeed dagaalame oo ka tirsan Al Shabab lagu dilay duqeymihii bishan laga fuliyey Somalia, waxaana intaas ay sii raacisay in qof shacab ah aysan waxyeello soo gaarin.
Bishii hore Military-ga Mareykanku waxa uu sheegay inuu dilay Abdulhakim Dhuqub oo ahaa ku xigeenka madaxa IS ee Somalia kadib duqeyn ka dhacday gobolka Bari gaar ahaan deegaanka Xiriiro ee duleedka degmada Isku shuban.
Mareykanka ayaa sanadkan oo kaliya gudaha Somalia ka fuliyey 37 duqeymo waxaana badankood lala beegsaday dagaalyahanada Al Shabab.